Ny FTC ary aza manara-maso
Alarobia 26 Janoary 2011 Alatsinainy, Septambra 28, 2020 Douglas Karr
Efa somary be ny vaovao momba ny fangatahan'ny FTC ho an'ny orinasan-tserasera ahafahana manome fampisehoana manome hery ny mpanjifa tsy harahina. Raha mbola tsy namaky ilay pejy 122 ianao Privacy tatitra, heverinao fa nametraka karazana tsipika amin'ny fasika ny FTC amin'ny fampiasa iray izay angatahin'izy ireo antsoina Aza manenjika.
Inona ny Aza manenjika?
Misy fomba maro anarahan'ny orinasa ny fihetsika ataon'ny mpanjifa an-tserasera. Ny malaza indrindra, mazava ho azy, dia ny cookies an'ny browser izay mitahiry data sy fampahalalana rehefa mifanakalo amin'ny tranokala ianao. Ny cookies sasany dia ankolafy fahatelo, midika izany fa azo zahana amin'ny tranonkala maro ny mpanjifa. Ary koa, misy ny fomba fisamborana angona amin'ny alàlan'ny rakitra Flash… mety tsy lany daty ireo ary tsy voafafa matetika rehefa mamafa ny cookies ao anaty tranokala ianao.
Aza manenjika dia endri-javatra tsy maintsy atao izay tian'ny FTC hampiharina izay manome hery ny mpanjifa hijanona tsy hanaraka. Ny hevitra iray dia ny manondro fotsiny rehefa misy doka napetraka miaraka amin'ny angon-drakitra voasoratra, manolotra ny mpanjifa tsy hiala amin'ny fisamborana data sy ilay doka. Hevitra iray hafa avy amin'ny FTC ny manome, fa tsy tokony hanome Ara-potoana angona azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlan'ny mpanjifa hametraka doka mifandraika.
Na dia nanome izao sosokevitra izao aza ny FTC… ary somary nanasongadina ihany fa raha tsy manana zavatra ny indostria dia mety… fantatr'izy ireo ihany koa ny vokatr'izany haitao izany. Ny marina dia ireo mpivarotra tompon'andraikitra sy orinasan-tserasera tompon'andraikitra dia mampiasa angon-drakitra fitondran-tena mba hiteraka traikefa tsara kokoa sy mifandraika kokoa amin'ny mpampiasa. Manaiky izany ny FTC amin'ny filazany:
Ny mekanisma toy izany dia tsy tokony hanimba ny tombontsoa atolotry ny dokambarotra fitondran-tena amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola amin'ny atiny sy serivisy an-tserasera ary fanomezana dokam-barotra manokana izay lanjan'ireo mpanjifa maro.
Ny tatitra momba ny tsiambaratelo dia manohy milaza fa misy ny rezistra foibe toa ny Aza Call Tsy mitombina ny lisitra ary tsy hozahana ho vahaolana. Ny tatitra momba ny tsiambaratelo FTC, tenany, dia manangana fanontaniana lehibe maromaro:
Ahoana no tokony hanaovana izany mekanisma izany atolotra ho an'ny mpanjifa ary ampahibemaso?
Ahoana no fomba hamoronana ny mekanika toy izany mazava sy azo ampiasaina araka izay azo atao ho an'ny mpanjifa?
Inona moa ny mety ho vidiny sy tombony azo ny fanolorana ny mekanisma? Ohatra, firy ny mpanjifa
mety hisafidy ny tsy hahazo dokambarotra kendrena ve ianao?
Firifiry ny mpanjifa, amin'ny fototra tanteraka sy isan-jato, no nampiasa ny fitaovana opt-out omena amin'izao fotoana izao?
Inona no mety hitranga fiantraikany raha mpanjifa marobe no mifidy ny tsy hiala?
Inona no ho vokany eo amin'ny mpampanonta sy mpanao dokambarotra an-tserasera, ary ahoana no ho vokatr'izany misy fiantraikany amin'ny mpanjifa?
Tokony hanana ny hevitry ny a mekanisma safidy manerantany hitarina mihoatra ny doka fitondran-tena amin'ny Internet ary asio, ohatra, ny doka fitondran-tena ho an'ny rindranasa finday?
Raha toa ny sehatra tsy miankina tsy mampihatra mekanisma safidy fanamiana mandaitra an-tsitrapo, dia tokony ny FTC fahazoan-dàlana hanao lalàna mitaky mekanika toy izany?
Ka… tsy misy antony tokony hikorontanana amin'izao fotoana izao. Aza manenjika tsy zavatra azo antoka. Ny vinavinako dia tsy horaisin'ny be sy ny maro velively. Raha ny tokony ho izy, ny vinavinako dia ny hitondran'ny tatitra ho tsiambaratelo mangarahara kokoa sy ny fanaraha-maso ny toerana (attn: Facebook). Tsy zavatra ratsy izany, heveriko fa ny ankamaroan'ny mpivarotra ara-dalàna dia mankasitraka fanambarana sy fanaraha-maso matanjaka sy mazava.
Te-hahita manokana ireo mpizaha tany mampiasa fampiasa logging sy fandefasan-kafatra izay manome valiny mazava amin'ny mpampiasa aho rehefa angonina ny angon-drakitra, iza no mitahiry izany, ary ny fomba ampiasana azy hampisehoana doka mifandraika na atiny mavitrika. Raha afaka manome fenitra sasantsasany ny indostria dia ho fandrosoana lehibe izany na ho an'ny mpanjifa na ho an'ny mpivarotra. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny Aza manenjika tranokala fiaraha-miasa.
Tags: aza miantsotsy manenjikaftcara-potoana